Ingxelo yaseNorton: Amaqhinga enkxaso kwezobuchwephesha sisisongelo sobuqhetseba esinguNombolo 1
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ingxelo yaseNorton: Amaqhinga enkxaso kwezobuchwephesha sisisongelo sobuqhetseba esinguNombolo 1
Iqela lophando le-NortonLifeLock kwihlabathi liphela, i-Norton Labs, namhlanje lipapashe ingxelo yayo yekota yesithathu yeNgxelo yoKhuseleko loMthengi kwiCyber, ichaza ulwazi oluphezulu lokukhuseleka kwabathengi kunye nokususa ukusukela ngoJulayi ukuya kuSeptemba 2021. Iziphumo zamva nje zibonisa ubuqhetseba benkxaso yezobuchwephesha, obuhlala bufika njengesilumkiso sokuvela. efihliweyo ekholisayo esebenzisa amagama kunye nokufaka uphawu kwinkampani ezinkulu zobuchwephesha, zibe sesoyikiso esiphezulu kubathengi. Itekhnoloji yokuxhasa ubuqhetseba kulindeleke ukuba yande kwixesha leholide elizayo, kunye nokuthenga kunye nohlaselo olunxulumene nothotho olunxulumene nesisa.
I-Norton ivale ngaphezulu kwe-12.3 yezigidi ze-URL zenkxaso yezobuchwephesha, ebeka uluhlu lwezisongelo zobuqhetseba kwiiveki ezili-13 ezilandelelanayo phakathi kukaJulayi noSeptemba. Ukusebenza kolu hlobo lokukhwabanisa kunyuke ngexesha lobhubhane ngenxa yokwanda kwabathengi ukuthembela kwizixhobo zabo ukulawula iishedyuli zomsebenzi we-hybrid kunye nemisebenzi yosapho.
UDarren Shou, intloko yezobuchwepheshe, iNortonLifeLock uthi: “Ukwazisa kokona kuzikhusela kulwahlaselo kujoliswe kulo. Ungaze ubize inombolo edweliswe kwi-tech-pop-up, kwaye endaweni yoko fikelela kwinkampani ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yabo esemthethweni ukuqinisekisa imeko kunye namanyathelo alandelayo.
I-Norton ivimbe ngempumelelo phantse i-860 yezigidi kwiisoyikisi zoKhuseleko kwi-cyber kwikota ephelileyo, kubandakanya nezigidi ezingama-41 zefayile esekwe kwifayile, iifayile ezingama-309,666 ze-mobile-malware, phantse i-15 yezigidi zemizamo yobuqhetseba kunye nokufunyanwa kwe -hlengware ezingama-52,213.
Iziphumo ezongezelelekileyo ezivela kwiNgxelo yoPhuculo lwaBathengi kwiCyber ​​zibandakanya:
Impahla yokudlala ebonakalayo inexabiso lokwenyani: Rare, izinto zomdlalo zifunwa kakhulu emva kwaye zinokurhweba kwiimarike zehlabathi lokwenyani. Umzekelo, umdlalo odlalwa ngabantu abaninzi kwi-intanethi uchukumisa i "Hat Hat," ebixatyiswe kutshanje ngama- $ 6,700. IiLebhu zaseNorton zibambe iphulo elitsha lobuqhetseba elungiselelwe ngokukodwa ukufumana iziqinisekiso zokungena kwabadlali kunye nolwazi lokungqinisisa izinto ezimbini ngenjongo yokweba nokuthengisa izinto ezinobungakanani obuphezulu.
Amaphepha asebhankini obuqhetseba kwi-Intanethi ayakholisa: Abaphandi beLabort yaseNorton bachonge iphulo lokufumana ulwazi ngobuqhetseba elijolise kubathengi bebhanki kunye nekopi yecarbon yekhasi lasekhaya lebhanki lokwenyani ukuze babakhohlise ukuze bangenise iziqinisekiso zabo.
Amakhadi ezipho ezibiweyo (phantse) alungile njengemali: Ngokukodwa njengoko iiholide zikufuphi, abathengi kufuneka bazi ukuba amakhadi ezipho ajolise ikakhulu kubahlaseli kuba banokhuseleko olusezantsi kunamakhadi etyala kwaye ababophelelwanga kwigama lomntu othile. Ukongeza, amakhadi ezipho amaninzi enziwa yinkampani enye enenombolo ezili-19 kunye nePIN enamanani ama-4. Abahlaseli basebenzisa iiwebhusayithi ezenzelwe ukukhangela ibhalansi yekhadi lesipho ukufumanisa inombolo yekhadi esebenzayo kunye nokudibanisa iipini, ukubanika ukufikelela ngokupheleleyo kwimali.
Abahlaseli baqhubeka nokujolisa kwiCawa yamaRoma Katolika kunye neVatican: Uphando olutsha lweLebhu yaseNorton lubonisa ukuba ngabaqhekezi, abasebenza ngaphandle kwe China, bebejolise kwiCawa yamaRoma Katolika naseVatican. Kwimeko enye, abaphandi bafumanisa i-malware ekujoliswe kuyo kwiifayile ezibonakala ngathi ngamaxwebhu ahambelana neVatican kodwa asulela izixhobo zabasebenzisi abafikelela kumaxwebhu. Kwityeli lesibini, iikhompyuter ezikwiVatican zifunyenwe zine-malware efakiweyo. Ngelixa olu hlaselo lujolisiweyo luhlala lunxulunyaniswa nemibutho emikhulu, abantu abakumaqela anomdla okhethekileyo, abaphikisi okanye abantu abanemisebenzi enefuthe nabo banokuthi babe phantsi kohlaselo olufanayo, kwaye abathengi ngokubanzi kufuneka bahlale bephaphile ngokuchasene nemikhankaso yobuqhetseba kunye namaphepha ewebhu asulelekileyo.